ရခိုငျပွညျနယျကနလောတဲ့ ယာဉျလိုငျးတှကေို ယာယီရပျဆိုငျးထားခွငျးမရှိဘဲ ပိတျဆို့စဈဆေးမူမြားပွုလုပျ – Voice of Myanmar
ရနျကုနျ သွဂုတျ ၂၂ . ၂၀၂၀
ရခိုငျပွညျနယျကနေ ရနျကုနျကိုဝငျလာတဲ့ကားတှကေို ပဲခူးအထှကျနဲ့တိုကျကွီးဂိတျတှမှော ပိတျဆို့ စဈဆေးမူတှေ ပွုလုပျနတေယျလို့ ရနျကုနျတိုငျး၊ ထနျးတပငျမွို့နယျ အမှတျ ၁ တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျဘုနျးကြျောစံဦးက VOM ကိုပွောပါတယျ ။
“ဧရာဝတီတိုငျးဘကျကလာတဲ့ကားတှကေို ထနျးတပငျကနပွေီး လှိုငျသာယာမရောကျခငျ အဖှဲ့စုံနဲ့စဈဆေးနပေါတယျ။ ဧရာဝတီတိုငျးဘကျမှာလဲ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှေ ဌာနဆိုငျရာတှရေော စဈဆေးနတေဲ့အတှကျ ဒီဘကျမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ကြှံလာတာမရှိသေးပါဘူး “လို့ ဦးအောငျဘုနျးကြျောစံဦးကပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ရခိုငျဘကျကိုသှားရမယျ့ကားတှကေို ရပျဆိုငျးဖို့အတှကျ ညှနျကွားထားတာမရှိသေးပါဘူးလို့ သိရပါတယျ။
” ရခိုငျဘကျကိုသှားရမယျ့ကားတှကေို ရပျဆိုငျးဖို့အတှကျ ညှနျကွားထားတာမရှိသေးပါဘူး၊ ရခိုငျဘကျကလာတဲ့ ယာဉျလိုငျးတှကေို သကျဆိုငျရာလမျးကွောငျးဖွဈတဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးလမျးကွောငျးတှရေယျ၊ ပဲခူးဘကျကဝငျလာတဲ့ ယာဉျလိုငျးတှကေိုလညျး ပဲခူးအထှကျနဲ့တိုကျကွီးတိုးဂိတျတှမှော ကနျြးမာရေးစဈဆေးမူတှပွေုလုပျပွီးတော့ ခရီးသညျတှနေဲ့ယာဉျမောငျးတှကေို Quarantine ဝငျအောငျလုပျဆောငျမူတှပွေုလုပျနပေါတယျ”လို့ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ အမှတျ (၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါသန်တာမိုးကပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ရနျကုနျကနေ ရခိုငျပွညျနယျကို ပွေးဆှဲပေးနတေဲ့ ကားလိုငျးတှကေိုလညျး ယာယီပိတျသိမျးခိုငျးတာ ညှနျကွားထားမူမရှိသေးပါလို့ ရနျကုနျတိုငျး အမြားပွညျသူသယျပို့ဆောငျရေး ကွီးကွပျမှူအာဏာပိုငျအဖှဲ့ (YRTA) တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး ဦးလှအောငျက VOM ကိုပွောပါတယျ။
” ကြှနျတျောတို့ဘကျက ဘာမှရပျဆိုငျးဖို့ ထုတျပွနျထားတာမရှိပါဘူး ။COVID – 19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေး အမြိုးသားအဆငျ့ဗဟိုကျောမတီကလဲ သှားတဲ့လာတဲ့လူတှပေျေါမှာပဲ Quarantine ဝငျတာကို ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာထုတျပွနျထားတယျ ။ ယာဉျလိုငျးတှမှော သှားတဲ့လူမရှိရငျတော့ ယာဉျလိုငျးတှရေပျသှားလိမျ့မယျ ။သယျယူပို့ဆငျေရေးအပိုငျးမှာ ဘာမှတော့ထုတျပွနျပွီးပေးထားတဲ့အပိုငျးမရှိသေးဘူး ” လို့ ဦးလှအောငျကပွောပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ COVID -19 ရောဂါပွနျ့ပှားနတောကွောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျကို ပွေးဆှဲနတေဲ့ လကွေောငျးလိုငျး ၅ လိုငျးကလညျး ယာယီရပျဆိုငျးထားတာတှကေို ပွုလုပျထားတယျလို့ သိရပါတယျ ။
မွနျမာအမြိုးသားလကွေောငျးလိုငျးက စကျတငျဘာ ၅ ရကျအထိ၊ Golden Myanmar လကွေောငျးလိုငျးက သွဂုတျ ၃၁ရကျအထိ၊ Air Thanlwin လကွေောငျးလိုငျးက သွဂုတျ ၃၁ ရကျအထိ၊ မနျးရတနာပုံလကွေောငျးလိုငျးက စကျတငျဘာလအကုနျအထိ ယာယီရပျဆိုငျးထားပွီ့းAir KBZ လကွေောငျးလိုငျးကတော့ ပွေးဆှဲမူကို လြော့ပွီးပွေးဆှဲပေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါအပွငျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာပွေးဆှဲနတေဲ့ ပွညျတှငျးရကွေောငျးနဲ့ ပုဂ်ဂိလိကရယောဉျတှကေိုလညျး သွဂုတျ၂၁ ရကျစတငျကာ ယာယီရပျဆိုငျးထားတယျလို့ ပွညျတှငျးရကွေောငျးပို့ဆောငျရေး( ရခိုငျဌာနခှဲ) လကျထောကျအထှထှေမေနျနဂြော ဦးအောငျလငျးက ပွောပါတယျ။
” ပွညျတှငျးရကွေောငျးက ဧရာဝတီတိုငျးဘကျကိုပွေးတာက ကုနျတငျသင်ျဘောပဲပွေးတာပါ ။ လူစီးသင်ျဘောမပွေးပါဘူး ။ရခိုငျဘကျကလာတာလညျး ဆကျစပျမူမရှိပါဘူး၊ မတငျပါဘူး”လို့ ပွညျတှငျးရကွေောငျးပို့ ဆောငျရေး ( မွဈဝကြှနျးပျေါဌာနခှဲ) လကျထကျေအထှထှေမေနျနဂြော ဦးလှဝငျးနိုငျကပွောပါတယျ။
အခုလကျရှိ မွနျမာနိုငျငံမှာ COVID – 19 ရောဂါ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာ ၄၃၅ ဦး၊ သဆေုံးသူ ၆ ဦးရှိနပွေီး ဒုတိယလှိုငျးအဖွဈဝငျလာတဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ရောဂါဟာ လူအခငျြးခငျြးထိတှရေုံ့တငျမကဘဲ အသကျရှုလမျးကွောငျးကနလေညျး ကူးစကျနိုငျတာလညျးဖွဈတယျလို့ ဆရာဝနျအသိုငျးအဝိုငျးကနေ သိရပါတယျ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေလာတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်းမရှိဘဲ ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမူများပြုလုပ်
ရန်ကုန် သြဂုတ် ၂၂ . ၂၀၂၀
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကိုဝင်လာတဲ့ကားတွေကို ပဲခူးအထွက်နဲ့ တိုက်ကြီးဂိတ်တွေမှာ ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမူတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် အမှတ် ၁ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဘုန်းကျော်စံဦးက VOM ကိုပြောပါတယ် ။
“ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကလာတဲ့ကားတွေကို ထန်းတပင်ကနေပြီး လှိုင်သာယာမရောက်ခင် အဖွဲ့ စုံနဲ့ စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်မှာလဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဌာနဆိုင်ရာတွေရော စစ်ဆေးနေတဲ့အတွက် ဒီဘက်မှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ကျွံလာတာမရှိသေးပါဘူး “လို့ဦးအောင်ဘုန်းကျော်စံဦးကပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ရခိုင်ဘက်ကိုသွားရမယ့်ကားတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် ညွှန်ကြားထားတာမရှိသေးပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။
” ရခိုင်ဘက်ကိုသွားရမယ့်ကားတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် ညွှန်ကြားထားတာမရှိသေးပါဘူး၊ ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းလမ်းကြောင်းတွေရယ်၊ ပဲခူးဘက်ကဝင်လာတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေကိုလည်း ပဲခူးအထွက်နဲ့ တိုက်ကြီးတိုးဂိတ်တွေမှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမူတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ ခရီးသည်တွေနဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကို Quarantine ဝင်အောင်လုပ်ဆောင်မူတွေပြုလုပ်နေပါတယ်”လို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ် အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သန္တာမိုးကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ ကားလိုင်းတွေကိုလည်း ယာယီပိတ်သိမ်းခိုင်းတာ ညွှန်ကြားထားမူမရှိသေးပါလို့ ရန်​ကုန်​တိုင်း အများပြည်​သူသယ်​ပို့​ဆောင်​​ရေး ကြီးကြပ်မှူအာဏာပိုင်​အဖွဲ့ (YRTA) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှအောင်က VOM ကိုပြောပါတယ်။
” ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ဘာမှရပ်ဆိုင်းဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး ။COVID – 19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကလဲ သွားတဲ့လာတဲ့လူတွေပေါ်မှာပဲ Quarantine ဝင်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတယ် ။ ယာဉ်လိုင်းတွေမှာ သွားတဲ့လူမရှိရင်တော့ ယာဉ်လိုင်းတွေရပ်သွားလ်ိမ့်မယ် ။သယ်ယူပို့ ဆေင်ရေးအပိုင်းမှာ ဘာမှတော့ထုတ်ပြန်ပြီးပေးထားတဲ့အပိုင်းမရှိသေးဘူး ” လို့ဦးလှအောင်ကပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ COVID -19 ရောဂါပြန့် ပွားနေတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်း ၅ လိုင်းကလည်း ယာယီရပ်ဆိုင်းထားတာတွေကို ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းက စက်တင်ဘာ ၅ ရက်အထိ၊ Golden Myanmar လေကြောင်းလိုင်းက သြဂုတ် ၃၁ရက်အထိ၊ Air Thanlwin လေကြောင်းလိုင်းက သြဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ၊ မန်းရတနာပုံလေကြောင်းလိုင်းက စက်တင်ဘာလအကုန်အထိ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားပြီ့း Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းကတော့ ပြေးဆွဲမူကို လျော့ပြီးပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ ပြည်တွင်းရေကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိလိကရေယာဉ်တွေကိုလည်း သြဂုတ်၂၁ ရက်စတင်ကာ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး( ရခိုင်ဌာနခွဲ) လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးအောင်လင်းက ပြောပါတယ်။
” ပြည်တွင်းရေကြောင်းက ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကိုပြေးတာက ကုန်တင်သင်္ဘောပဲပြေးတာပါ ။ လူစီးသင်္ဘောမပြေးပါဘူး ။ရခိုင်ဘက်ကလာတာလည်း ဆက်စပ်မူမရှိပါဘူး၊ မတင်ပါဘူး”လို့ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေး ( မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ) လက်ထေက်အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးလှဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။
အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID – 19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၄၃၅ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိနေပြီး ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ်ဝင်လာတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ရောဂါဟာ လူအချင်းချင်းထိတွေ့ရုံတင်မကဘဲ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေလည်း ကူးစက်နိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆရာဝန်အသိုင်းအဝိုင်းကနေ သိရပါတယ်။